Usoro ịre ahịa ọdịnaya na-aga n'ihu na-agbanwe, ọkachasị n'ọganihu na teknụzụ mkpanaka yana ịnweta nnukwu bandwidth na-aghọ ebe nkịtị. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịmatakwu ihe na ụzọ ha iji mepụta ọdịnaya. Otu ihe anyị na-eme na-arụ ọrụ oge na mgbagwoju anya… anyị na-emepụta ihe ngosi ma jiri ọdịnaya maka webinar, anyị na-eji ọdịnaya ahụ maka ihe ngosi ebugharị na Slideshare, anyị na-eji ọdịnaya ahụ iji zụlite ihe ọmụma na ikekwe ụfọdụ mpempe akwụkwọ ahịa, akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ ihe ọmụmụ studies ma mgbe ahụ anyị na-eji ọdịnaya dị na blog posts na mgbe ụfọdụ pịa mbipụta.
PRWeb emepụtala matrik a iji gosipụta ụdị ọdịnaya dị iche iche nwere ike ịrịọ ndị ahịa dị iche iche ma nye eziokwu ma ọ bụ aro banyere nke ọ bụla. Elu na-egosi ụdị ọdịnaya dị iche iche, ebe ala na-akọwa etu esi eji ọdịnaya ndị ahụ.
Have nwere atụmatụ maka usoro ịre ahịa ọdịnaya niile a? Have nwere usoro mbipụta akwụkwọ iji kpoo ọdịnaya gị na nyiwe ndị na-eru ndị na-ege gị ntị ịdọta? Have nwere atụmatụ nkwado iji bulie uche nke ọdịnaya gị ga-enweta mgbe ebipụtara ya?
Tags: isiokwuịde blọgụinfographicAhịa PodcastVidio Ahịambipụta ndị nchụ nta akụkọprwebelekọta mmadụ media